Antibiotics for Acne ဝက်ခြံအတွက် ပဋိဇီဝဆေးများ – Mawlamyine Daily
Posted on July 12, 2018 by Mawlamyine Daily
၁။ ဆရာရှင့် မိန်းကလေးပါ အသက် ၂၃ နှစ်ပါ အိမ်ထောင်မရှိပါ ရာသီမှန်ပါတယ် ဆေးရုံကြီးမှာ ဝက်ခြံဖြစ်လို့ အရေပြားမှာ ပြတာပါ Doxycycline 100mg ကို မနက်ည ၁လုံးစီသောက်ခိုင်းပါတယ် သောက်ပြီး ၄ရက်မြောက်နေ့မှာ အစားစားရင် အောင့်ပါတယ် အန်ချင်သလိုဖြစ်ပါတယ် အောင့်တာ၂ရက်ကြာလို့ ဆေးရဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးကြောင့် ဖြစ်မှန်း ရှာကြည့်လို့ သိရပါတယ် ၁ခါ အန်ပါတယ်။ ဆေးရုံရဲ့ ပြနေကြဆရာဝန်ဆီ ပြန်သွားပြတော့ ဆေးပြောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။ Azithromycin 500mg ကို ၁ပတ် ၃ရက်သောက်ဖို့ ညွှန်းပေးလိုက်ပါတယ်။ ယခုလက်ရှိ azithromycin မသောက်သေးပါ။ အစာစားရင် လည်ပင်းကနေ ရင်ခေါင်းထိ စူးပြီးအောင့်နေဆဲပါ တံတွေးမြိုချရင်လည်း အောင့်ပါတယ်။ ဆေးရဲ့ ဆိုကျိုးက အချိန်ဘယ်လောက်ထိကြာနိုင်ပါသလဲရှင့်။ အသက် အန္တရာယ် ထိခိုက်နိုင်ပါသလားရှင့်။ လည်ချောင်းကနေ ရင်ခေါင်းထိ နာတာအောင့်တာ သက်သာအောင် ဘယ်လိုလုပ်သင့်သလဲ ပြောပြပေးပါရှင့်။ ပြနေကြ ဆရာဝန်ဆီထပ်သွားပြီး ပြောပြသင့်ပါသလားရှင့်။ အသိဆရာဝန်လည်း မရှိတာကြောင့် ဆရာ့ဆီ အကူအညီတောင်းရခြင်းဖြစ်ပါသည်။
၂။ ကျွန်မ အသက် ၃၀ပါ မေးဖျားမှာ ဝက်ခြံပေါက်တာ မနေ့ကငြုပ်သီး ဆီသက်လိုက်တာ အညှော်ဝင်ပြီး ယောင်တတ်လာလို့ တော်တော်နာပါတယ်ဆရာ။ အနာပေါက်နေရင် အညှော်မိလို့ ယောင်လာတာဟာ ဘယ်လိုများ သက်ဆိုင်ပါသလဲဆရာ။
၃။ ဆရာရှင့် သမီးမျက်နှာရဲ့ နှာခေါင်းဘေးနားမှာ ဝက်ခြံပုန်းလားတော့မသိဘူး အကျိတ်လို အဖုလေးထွက်လာပါတယ်။ ရဲနေပါတယ်။ အရမ်းလည်းနာပါတယ်။ ရုတ်တရက်ကြီးထွက်လာပါတယ်။ ဘာဆေးသောက်သင့်ပါလဲရှင့်။ မေးအောက်မှာရော နှာခေါင်းဘေး ပါးနေရာမှာပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ ဖြေကြားပေးပါရှင့်။
၄။ ဆရာ ကျနော်ဝက်ခြံတွေ အရမ်းထွက်နေလို့ပါဆရာ။ ဘာဆေးစားရမလည်းဆရာ။ ဘာအစားစာ ရှောင်သင့်လည်း ဆရာ။ ဝမ်းလည်းအမြဲချုပ်နေတယ်ဆရာ။
၅။ ဆရာရိုသေစွာလေးစားစွာဖြင့် စာထပ်ရေးလိုက်ပါတယ်။ ကျွန်မအခု ကလေးမွေးပြီးတာ တလနဲ့ ၈ ရက်ရှိပါပြီ။ ဗိုက်ခွဲမွေးပါတယ်။ ကိုယ်ဝန်လေးလထဲကထွက်တဲ့ ဝက်ခြံက မွေးပြီးတလကျော်မှာ ပိုဆိုးလာပါတယ်။ ထိုင်းဖက်သွားပြီး အရေပြားဆရာဝန်ရှာတော့ လိမ်းဆေးနဲ့ အမောင်စလင် (၅ဝဝ အား) မနက်၂ လုံးည ၂ လုံးသောက်ခိုင်းပါတယ်။ ၂ ပတ်လောက်သောက်ပြီး ဆရာဝန်ထပ်ပြတော့ တလထပ်သောက်ခိုင်းပါတယ်။ ကလေးကို မိခင်နို့တိုက်တဲ့အတွက် ကလေးအတွက် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဖြစ်နိုင်ပါသလား။ ဆေးသောက်လဲ ဝက်ခြံအသစ်တွေက ထွက်မြဲပါ။ ပြည်ဖု အကြီးကြီးတွေထွက်ပါတယ်။ နား၊ ပါး၊ မေးစေ့၊ ရင်ဘတ်၊ နောက်ကျောတပြင်လုံး မြင်လို့မကောင်းအောင်ထွက်ပါတယ်။ ထိုင်းအရေပြားဆရာဝန်ကတွေ ၆ လလောက်ကုရမယ်လို့ပြောပါတယ်။ မိခင်နို့တိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက် ဆေး ဆက်သောက်သင့် မသင့် အကြံဉာဏ်လေးပေးစေလိုပါတယ်။ ကလေးအတွက်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမရှိပဲ တခြား ဘာဆေးများသောက်သင့်ပါသလဲ။ လေးစားစွာဖြင့်။
ပဋိဇီဝဆေးတွေရဲ့ ဝက်ခြံကိုသက်ရောက်စေနိုင်တဲ့ အစွမ်းတွေထဲမှာ အရေးကြီးဆုံးက (ဗက်တီးးရီးယား) တွေရဲ့ အရေအတွက်ကို သိသိသာသာလျော့နည်းစေတာ ဖြစ်တယ်။ သွေးဖြူဥကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ နေမထိထိုင်မသာ ဖြစ်တာကိုလဲ နည်းစေနိုင်တယ်။ ဝက်ခြံအရည်ထဲမှာ အဆီကိုလဲ လျော့နည်းစေတာမို့ ရောင်ရမ်းခြင်းဖြစ်စဉ်ကို သက်သာစေတယ်။ သတိထားဘို့က ဘယ်ပဋိဇီဝဆေးမဆို အမျိုးသမီးတွေမှာ မွေးလမ်းကြောင်း မှိုဝင်တာ ဖြစ်စေနိုင်တယ်။ ကိုယ်ဝန်တားဆေးရဲ့ အာနိသင်ကိုလဲ ထိခိုက်တတ်တယ်။ ကိုယ်ဝန်ရျိရင် ဆေးရွေးရမယ်။
၂။ Erythromycin (အရစ်သရိုမိုင်စင်) ကိုလဲ သုံးနိုင်တယ်။ သူက (တက်ထွာဆိုက်ကလင်း) ထက်သာတာက ရောင်ရမ်းခြင်း ဖြစ်စဉ်အတွက် ပိုကောင်းတယ်။ အစားနဲ့လဲ သောက်လို့ရတော့ အစားကြီးတဲ့ ငယ်ရွယ်သူတွေနဲ့ ကိုက်တယ်။ တခါသောက် 250 – 500 mg တနေ့ ၂ ကြိမ်ပေးတယ်။ ပျို့အန်ချင်တာ ဖြစ်တတ်တယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်တွေလဲ ပေးနိုင်တယ်။
8. Antibiotics for Acne ဝက်ခြံအတွက် ပဋိဇီဝဆေးများ https://doctortintswe.blogspot.com/2017/05/antibiotics-for-acne.html
9. Betnovate (ဘက်နိုဗိတ်) လိမ်းဆေးများ https://doctortintswe.blogspot.com/2015/11/betnovate.html?q=Acne+vulgaris
10. Body Acne ကိုယ်မှာပေါက်တဲ့ ဝက်ခြံ http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/thigh-acne.html
11. Dermavive ဝက်ခြံဆေးဆပ်ပြာ http://doctortintswe.blogspot.com/2016/07/dermavive.html
12. Diane-35 တားဆေး ဝက်ခြံအတွက်လည်းပေး http://doctortintswe.blogspot.com/2016/05/diane-35.html
13. Seborrheic Keratosis or Keratosis pilaris ဆားဝက်ခြံ http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/seborrheic-keratosis-or-keratosis.html
14. Thigh Acne ချိုင်းနဲ့ ပေါင်မှာပေါက်တဲ့ ဝက်ခြံ http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/thigh-acne.html